१० महिने शिशु सहित एकै परिवारका तीन जनाले भिरबाट हाम फालेर प्राण त्यगे यस्तो छ कारण – Khabar Chautari
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष १७, २०७७ समय: १४:३६:३१
प्युठान । भिरबाट बाबुले पनि हा’ म ‘फा’लेर प्रा’ण त्या’गे दे,ह त्या,ग गर्नु कुनै चानचुने कुरा हैन । त्यो पनि नवजात शिशुको साथमा । दे,ह त्या,ग गरेकी एक जना आमाले आफ्नै १० महिने शिशुलाई पहिला रुखको हाँhगोमा झु, jण्ड्या, aएर त्यसै हाँhगोमा उनी आफु पनि झुj, ण्डिj, एको अवस्थामा गाउँलेहरुले फेला पारेका छन् । आमा र उक्त शिशु झु jण्डीaएको उक्त ठाउँदेखि केही परको भिरबाट बाबुले पनि हा’ xम ‘फा’xलेर प्रा’xण
त्या’xगेका छन् ।यो प्युठान जिल्लाको नौबहीनीगाउँपालिका वडा नं. २ को लिगा भन्ने ठाउँमा घटेको निकै नै दुःखद घटना हो । प्यूठानको लिगामा भएको यो घ,टनालाई गाउँलेहरुले दे,ह त्या,ग नभई ह’ ‘त्या भएको हुने सक्ने शं, का व्यक्त गरेका छन् । यो घ,टनामा मृ, त्यु भएकाको आफन्तहरुको भनाई अनुसार घ,टना हुने दिनमा सबै कुरा सामान्य नै भएको बताएका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
भिरबाट बाबुले पनि हा’ म ‘फा’लेर प्रा’ण त्या’गे दे,ह त्या,ग गर्नु कुनै चानचुने कुरा हैन । त्यो पनि नवजात शिशुको साथमा । दे,ह त्या,ग गरेकी एक जना आमाले आफ्नै १० महिने शिशुलाई पहिला रुखको हाँhगोमा झु, jण्ड्या, aएर त्यसै हाँhगोमा उनी आफु पनि झुj, ण्डिj, एको अवस्थामा गाउँलेहरुले फेला पारेका छन् । आमा र उक्त शिशु झु jण्डीaएको उक्त ठाउँदेखि केही परको भिरबाट बाबुले पनि हा’ xम ‘फा’xलेर प्रा’xण
त्या’xगेका छन् ।यो प्युठान जिल्लाको नौबहीनीगाउँपालिका वडा नं. २ को लिगा भन्ने ठाउँमा घटेको निकै नै दुःखद घटना हो । प्यूठानको लिगामा भएको यो घ,टनालाई गाउँलेहरुले दे,ह त्या,ग नभई ह’ ‘त्या भएको हुने सक्ने शं, का व्यक्त गरेका छन् । यो घ,टनामा मृ, त्यु भएकाको आफन्तहरुको भनाई अनुसार घ,टना हुने दिनमा सबै कुरा सामान्य नै भएको बताएका छन्
शरीरमा आएका मुसा तथा कोठीले दिक्क हुनुहन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्, केही दिनमै गाएब
काठमाडौँ । कयौँ मानिस शरीरमा आएका अनावश्यक मुसा तथा कोठीका कारण दिक्क भएका हुन्छन्। जसका कारण उनीहरुको सुन्दरतामा समेत असर परिरहेको हुन्छ।
यस्ता मुसा तथा कोठीबाट छुटकारा पाउने धेरैको चाहना हुन्छ। आज हामी तपाईलाई यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउने केही घरेलु उपायका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
आउनुहोस् जानौँ ती घरेलु उपायका बारेमा
१) स्याउको जुसले पनि मुसा तथा कोठीलाई जरैदेखि निर्मुल पार्ने काम गर्दछ। तपाईले हरेक दिन कपासको सहयोगले कम्तिमा ३ पटक स्याउको रस लगाउनुहोस् । यसो गर्दा कोठी वा मुसा सुकेर हटाउने गर्दछन्।
२) चुकुन्दरको पातले पनि मुसा तथा कोठी हराउन सहयोग गर्ने गर्दछन्। चुकुन्दरको पातलाई पिसेर त्यसमा थोरै मह मिसाउनुहोस् र मुसा तथा कोठीमा लगाउनुहोस्। यसो गर्दा केही दिनमै मुसा तथा कोठी हराएर जाने गर्दछन्।
३) बदामलाई मसिनो गरेर पिस्नुहोस् र त्यसमा गुलाव पाउडर मिसाउनुहोस्। उक्त पेस्ट कोठी वा मुसामा लगाउनुहोस्। हरेक दिन यो पेस्ट लगाउँदा केही दिनमै मुसा र कोठी गाएब हुन्छन्।
४) मौसमको रसले पनि कोठी तथा मौसम गाएब गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ। यस बाहेक काजुको टुक्राले पनि मुसा वा कोठी हटाउने काम गर्दछ।
५) चुना र घ्यू मिलाएर एक पेस्ट तयार गर्नुहोस् । उक्त पेस्टलाई हरेक दिन मुसामा लगाउनुहोस्। उक्त पेस्ट लगाउँदा पनि मुसा वा कोठी अचानक आएब हुन थाल्दछन्
६) फिटकिरी र मरिजको पेस्टले पनि मुसा वा कोठी हटाउने काम गर्दछ।
७) अगरबत्तिको खरानीलाई पेस्ट बनाएर लगाउँदा पनि मुसा वा कोठी गाएब हुने गर्दछ।
८) लसुनको पेस्ट बनाएर लगाउँदा पनि मुसा वा कोठी गाएब हुने गर्दछ।
९) धनियालाई पिसेर पेस्ट तयार गर्नुहोस् । यसलाई केही दिनसम्म मुसा वा कोठीमा लगाउनुहोस्। यसो गर्दा पनि मुसा वा कोठी गाएब हुने गर्दछन्।
१०) आलुको रसलाई लगाउँदा पनि मुसा वा कोठी गाएब हुने गर्दछन्।
११) प्याजको रसले पनि कोठी वा मुसा हटाउने काम गर्दछ।